Kenya oo dib u fasaxeysa duulimaadyada Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ilo loo qaateen ah ayaa xaqiijinaya, in Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya isku af-garteen in dib loo billabo safarradii cirka ee labada waddan kaas oo Kenya hakisay lix maalin ka hor.
NAIROBI, Kenya - Dowladda Kenya ayaa dib u fasaxeysa duulimaadyada Soomaaliya ee ay dhawaan joojisay, kadib markii Dowladda Soomaaliya dib u celisay diyaarado siday maqaadaraad laga soo raray magaalada Nairobi todobaadkii hore.
Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Kenya ayaa dhawaan ku dhawaaqi doonta in ay ka laabatay go’aankii hore, kaas oo soo baxay xilli uu socday dadaal la doonayo in lagu xalliyo khilaaf mudoo ka dhex taagnaa Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, kaas oo saameyn taban ku yeeshay xiriirka labada waddan.
Wada-hadallo diblumaasiyeed oo dhex maray labada waddan ayaa sababay isku soo dhawaansho hordhac ah, waxaana la madlay wada-xaajood hor leh oo la xariira ganasiga labada dal.
Dowlada Kenya oo aan wax sabab ah shaacin ay sheegtay 11-kii bishaan, in illaa bisha Sideedaad ee sanadkan ay hakinayso duulimaadyada ka yimaada ama aada Soomaaliya, halka Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya, Duraan Axmed Faarax, uu arrin la yaab leh ku tilmaantay go'aanka Kenya.